फिल्म बन्ने सम्भाबना बोकेको कृती जमुना न्यौपानेको उपन्यास ‘कैली’ सार्बजनिक « Pana Khabar
फिल्म बन्ने सम्भाबना बोकेको कृती जमुना न्यौपानेको उपन्यास ‘कैली’ सार्बजनिक
युवा लेखक जमुना न्यौपानेको पहिलो उपन्यास ‘कैली’ बजारमा आएको छ । गत शनिबार जावलाखेलस्थित बगैंचा रेस्टुराँमा सार्बजनिक गरिएको हो । स्कुल स्तरको अध्ययन पूरा गरेपछि उच्च शिक्षाका लागी सहर छिरेकी एक युवती उच्च बर्गको युवकसँग प्रेममा परेको घटनालाई उपन्यासमा मुल कथावस्तु बनाइएको छ ।
परदेशमा रहँदा नेपाली महिलाहरुले झेल्नुपर्ने समस्या र कठिनाइलाई उपन्यास कैलीमा उतारिएको छ । युवकको प्रेममा परेपछि गाउले केटी अमेरिका र इन्डोनेसियासम्म यात्रा गर्छे । यसै सेरोफेरोमा उपन्यास लेखिएको छ । खासगरी युवा अबस्थामा युवा, युवतीमा आउने परिबर्तन, समस्या, उतारचढावका बारेमा पुस्तक केन्द्रित छ ।
बुलबुल प्रकाशनले बजारमा ल्याएको उक्त पुस्तक चलचित्र निर्माता नीर शाह, गीतकार डा. कृष्णहरि बराल, संगीतकार चण्डिप्रसाद काफ्ले, गायक हेमन्त शर्मा र पत्रकार अश्विनी कोइरालाले संयुक्त रुपमा बिमोचन गरेका थिए । चलचित्र निर्माता नीर शाहले ‘कैली’ उपन्यास चलचित्र बन्न सक्ने सम्भाबना बोकेको कृति रहेको टिप्पणि गरे ।
प्रकाशित मिति : २०७४ पुष १०,सोमबार
किन लेखकलाई चाहिं आइडल बनाउन सकिंदैन ?
कविता : चारूमतीको कथा
गजल- गाई मारी गधा पोस्ने हामीसँगै छन् नि !
कविता – युगको अन्तिम रात
९९ बर्षको उमेरमा महाकाव्य लेख्दै राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे